Phones Spy ™ - ကျွမ်းကျင်သူ Jeff Tinklet ၏မိုဘိုင်းထောက်လှမ်းရေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဘယ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကသူလျှိုဆော့ဖ်ဝဲကို ၀ ယ်ယူရမလဲဆိုတာလူတိုင်းသိချင်ကြသည်။
အကောင်းဆုံးဖုန်းသူလျှို ၄ ယောက်စာရင်းပြုစုပြီးပြီ
သူလျှိုဖုန်းများအကြံပြုသည် FlexiSPY as အကောင်းဆုံးဆဲလ်ဖုန်းသူလျှိုအဖြေ 2020 ခုနှစ်တွင်! ဒါဟာအားလုံးစောင့်ကြည့်ဖြေရှင်းချက်အတွက်အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကအနည်းငယ်ပိုမြင့်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်သူလျှိုစွမ်းဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ဖောက်သည်အထောက်အကူပြု ၀ န်ထမ်းများအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး EXTREME ထုတ်ဝေမှုတွင်အခမဲ့စကားဝှက် cracker အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်ရရှိသည်။
ထို့အပြင်ဆန်းသစ်သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အဝေးထိန်းတပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောသင်ခန်းစာကိုအတွေ့အကြုံရှိပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်အတူကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် အမြစ် / jailbreak ပစ်မှတ်ထားမိုဘိုင်းစက်ကိရိယာနှင့် install သင့်အတွက် FlexiSPY ။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုစစ်ဆေးပါ FLEXI သူလျှိုသုံးသပ်ချက်.
ယခုပင်စဖတ်ပါ -> အကောင်းဆုံးအဖြေ FlexiSPY
mSpy သည်မကြာသေးမီက၎င်း၏ software ကို update လုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုအခါ rooting မလိုအပ်သောဖုန်းကိုသူလျှိုလုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ iPhone ကိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုလက်ကိုင်ဖုန်းသို့ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲစစ်ဆေးနိုင်သည်။ Jailbreak Solution မပါ ၀ င်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုစစ်ဆေးပါ MSPY သုံးသပ်ချက်.
ယခုပင်စဖတ်ပါ -> မလုံခြုံသောဖြေရှင်းချက် mSpy မရှိပါ
3. Highster မိုဘိုင်းသူလျှို
Highster Mobile Spy သည်အရောင်းရဆုံးသူလျှိုဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကအင်္ဂါရပ်များစွာနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့် စျေးကွက်ထဲမှာဒီလိုစွမ်းဆောင်ချက်တွေရှိသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုသူလျှိုလုပ်ဖို့ဈေးချိုတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုစျေးကွက်ထဲမှာမတွေ့ရပါ။ ဒါ့အပြင်သူကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာလိုင်စင်သက်တမ်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် mSpy ကိုဒုတိယစျေးအသက်သာဆုံး၊ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်အခြားရွေးချယ်စရာများအဖြစ်အကြံပြုသည်။
ALTERNATIVE -> ဈေးချိုစွာအစားထိုး mSpy
4. Spyera ဖုန်း
Spyera ဖုန်းသည်အတွေ့အကြုံများကိုစုဆောင်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သူလျှို app ကိုအမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့်ထားပြီးယနေ့တွင်သူတို့တွင်ကောင်းမွန်သော spy software ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤ app သည်သင်ရရှိသောအရာများအတွက်အနည်းငယ်စျေးကြီးလွန်းသည်။ သို့သော် Spyera သူလျှို app သည်တည်ငြိမ်ပြီးသုံးစွဲသူပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသည်အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုသင်ရွေးလိုက်ရင်သင်နောင်တမရဘူး။ သတိပြုပါ Phones သည် Spyera Discount Coupon ကို ၃၀% အထိထောက်ပံ့ပေးသည်။
ယခုပင်စဖတ်ပါ -> ပျမ်းမျှဖြေရှင်းချက် Spyera ဖုန်း
အဆိုပါ အကောင်းဆုံးဝယ်ပါ စပိုင်ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်လိမ့်မည် mSpyဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ထောက်လှမ်းရေးပစ္စည်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်ရဲ့အခြားရွေးချယ်စရာကတော့ Highster Mobile ပဲ။
အဆိုပါ ထိပ်တန်း RATED ကာ အဆုံးစွန်သူလျှိုဖြေရှင်းချက် ပါလိမ့်မယ် FlexiSPY အရာကျိန်းသေစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ခြေရာခံခြင်းစနစ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သူလျှိုများအတွက်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးပစ်မှတ်ထားသောမိုဘိုင်းစက်ကို root / jailbreak ပြုလုပ်၍ သင့်အတွက် FlexiSPY ကိုတပ်ဆင်မည့်နည်းပညာရှင်နှင့်လည်းသင့်ကိုပံ့ပိုးသည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြောင်း - author
ကျွန်တော့်နာမည်က Jeff Tinklet ပါ။ ကျွန်တော်က Phones Spy မှာအဓိကအကြောင်းအရာမန်နေဂျာနဲ့ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကိုယ်စားလှယ်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့သင်္ဘောကိုငါလမ်းပြတယ်၊ ဘယ်သတင်းတွေကိုဘယ်လိုဖုံးအုပ်ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်တယ်။
ငါ Wyoming မှာကြီးပြင်းလာတယ်။ ငါနယူးယောက်မှာနေထိုင်ပေမယ့်ငါ့နှလုံးက Highlands မှာရှိတယ်။
"လူအားလုံးကအတူတူပါပဲ။ bastards တွေကိုလိမ်တာပဲ။ FlexiSPY နဲ့သူဟာမိန်းကလေးတစ် ဦး မှလွဲလို့သူနဲ့မဆက်ဆံဘူးဆိုတာငါသိခဲ့ရတယ်။ ငါဘယ်လောက်တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသင်မမြင်နိုင်ဘူး။ ဤအရာသည်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ယခု မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားများအားစူးစမ်းရန်ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအစဉ်အမြဲအသုံးပြုလိမ့်မည်။ သူတို့စိတ်မချရပါ။ phonespy.com ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "
"ငါ Highster Mobile ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကောင်းတယ်။ လေးရက်အတွင်းမှာငါသံသယတွေကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်။ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီနာကျင်မှုကပိုကောင်းတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အတူကျွန်မရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တယ်။ ငါ့ကလေးတွေရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုတောင်ငါစိတ်ကူးခဲ့တယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲအစောပိုင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုန်းသူလျှို, Mark ။ "
သူသတင်းပို့တာတွေကမကောင်းဘူး၊ တိုတယ်၊ အသုံးမပြုနိုင်ဘူး။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သူအင်တာနက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအချိန်တော်တော်များများကုန်လွန်ခဲ့တယ်။ သူမဖုန်းထောက်လှမ်းရေးဆော့ဖ်ဝဲကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ငါချက်ချင်းပစ်လိုက်တယ်။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲနဲ့ငွေအမြောက်အများရှိတယ်။ "
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များသည်အဖိုးတန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်လင့်ခ်မှတစ်ဆင့်အက်ပလီကေးရှင်းကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်ရန်ကူညီပေးပါ
FlexiSPY သုံးသပ်ချက်များ & အဆင့် ၂၀၂၀ - Pros, Cons & Verdict
mSpy သုံးသပ်ချက်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2022 - Pros, Cons, Overview
Highster မိုဘိုင်းသုံးသပ်ချက်များ & အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2022 - Pros, Cons & စီရင်ချက်
Spyera မှ ၂၀၂၀ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Spyera သုံးစွဲသူ၏သုံးသပ်ချက်များ - ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ပါသလား။
Ultimate Win-Spy ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - PC Review ကို Remote Monitor လုပ်နည်း။
©ဖုန်းများသူလျှို ပင်မစာမျက်နှာ | ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ | ဆက်သွယ်ရန် | ရောင်းရန်စီးပွားရေး
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ browser တွင် cookies များကိုလည်းတားဆီးနိုင်သည်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း ၀ ဘ်ဆိုဒ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Affiliate link ကိုနှိပ်ပြီးနောက်သင် ၀ ယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သော commision တစ်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးဆောင်ပြီးသင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုဆက်လက်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။